Motera elektrika tokana
Motera elektrika dingana telo
Moto GOST ANP
IE2 / YE2 Motera
IE3 / YE3 Motera
Yb3 Fanapahana porofo moto
Paompy ao anaty rano lalina
Paompy paompy mitsivalana mitsivalana
Paompy afo Xbd
Paompy Jet mandeha irery
Paompy Peripheral mandeha irery
Paompy Solar borosy
DC Pump Pump Solar
Pst Horizontal Centrifugal Pump
Paompy afovoany mitsivalana mitsangana vy
Izahay dia mpanamboatra za-draharaha amin'ny motera dingana tokana, motera dingana telo ary paompy centrifugal.
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-23
Mpanao faharoa ny endrika mifarana amin'ny tovana -ar antony lehibe toy ny ...
Mivoaha, Biden in
avy amin'ny admin tamin'ny 21-01-20
Tamin'ny 19 Janoary dia namoaka horonantsary ny kabary fanaovam-beloma nataon'ny filoha Donald Trump ny trano fotsy rehefa nandao ny birao izy. Nanomboka tamin'ny fisaorana olona maro izy, anisan'izany ny vady aman-janany vavy, ny filoha lefitra Pence sy ny fianakaviany, ary koa ny Trano Fotsy sy ny mpiasa ao aminy. "Ny fitondrana vaovao dia ...
Ny antony nahatonga ny afo tamina motera telo dingana
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-12-29
Ny antony lehibe mahatonga ny maotera tsy misy ifandraisany amin'ny afo dia ny fisafidianana, fampiasana na fikojakojana tsy mandeha amin'ny laoniny. Ny maotera sasany dia ratsy kalitao, ary izany koa no mahatonga ny afo. borosy sy fantsom-batana.Motor switch, fuse and dist ...
Fanadihadiana momba ny zava-misy ankehitriny sy ny fampandrosoana Prospect an'ny indostrian'ny motera elektrika ao Shina amin'ny taona 2020
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-12-14
Famakafakana ny zava-misy ankehitriny sy ny vinavinan'ny fampandrosoana ny indostrian'ny motera elektrika any Shina amin'ny taona 2020 Ny motera no loharanon'ny herin'ny indostria. Amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny herinaratra sy ny andriamby, ny fifanakalozana eo amin'ny angovo herinaratra sy ny angovo kinetika dia reali ...
Nahoana no novonoina ny mpahay siansa niokleary any Iran?
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-11-30
I Israel dia firenena kely nefa matanjaka any Moyen-Orient satria manana fitaovam-piadiana niokleary izy. Efa ela i Israel no nihevitra an'i Iran ho tsilo eo anilany ary izany no fandrahonana lehibe indrindra. Noho izany Israel dia tsy nijanona nanelingelina ny ezak'i Iran, indrindra hanakanana an'i Iran tsy hamorona nokleary fitaovam-piadiana, ho enr ...
Ny fiantraikan'ny ekipa vaovaon'ny filoha amerikana Joe Biden amin'ny varotra ivelany any Shina
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-11-27
Antony Blinken, Linda Thomas-Greenfield ary Jake Sullivan dia mpikambana tao amin'ny Trano Fotsy Obama. Hita ho mpanohana mahatoky an'Andriamatoa Biden sy olona afovoany manjakazaka amin'ny politikany ivelany izy ireo. Linda Thomas-Greenfield, niasa tany Afrika nandritra ny taona maro ary ...
Fanadihadiana momba ny tabataba elektrika
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-11-25
Ny loharanom-pahefana main'ny motera elektrika dia ny tabataba elektromagnetika, tabataba mekanika ary tabataba rivotra. ● Feo elektromagnetika Ny fifangaroan'ny sahan'andriamby amin'ny elanelana misy ny motera dia miteraka hery radial izay miova arakaraka ny fotoana sy ny habaka, izay mahatonga ny ...
Fampiroboroboana ny maotera avo lenta
Ny fampidirana sy ny fandaminana indray ny arintany, ny harena ankibon'ny tany, ny fanamboarana fitaovana ary ny indostria hafa dia hampiroborobo kokoa ny fangatahana sy ny fampandrosoana ny vokatra maotera antonony. Ny fampiharana bebe kokoa ny politikam-pirenena momba ny fiarovana ny angovo sy ny fihenan'ny emission dia mandroso vaovao sy avo ...
Raha tondra-drano ny motera? Mbola afaka mandeha ve?
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-11-10
Fantatsika fa misy karazany maro ny motera elektrika, amin'ny ankapobeny ny motera dia tsy ho simban'ny rano, fa ny haavon'ny insulation kosa dia hihena be. Ny dingan'ny fanamboarana ny fidiran-drano amin'ny ankapobeny dia mitovy amin'ny karazan-motera rehetra.
Inona no mitranga rehefa tsy misy dingana iray ny dingana telo?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-11-09
Ny fihenan'ny dingana maotera an'ny motera telo dia manondro ny tsy fisian'ny dingana ao amin'ny stator mihodina ny famatsiana herinaratra dingana telo an'ny motera. Raha tsy misy ny fizotran'ny motera, raha matanjaka ny motera amin'izao fotoana izao hanombohana , ny motera amin'ny ankapobeny dia hamokatra feo "buzz", ary ...
Fampidirana fiarovana ny motera elektrika
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-11-02
Ny haavon'ny fiarovana ny motera elektrika GOGOGO dia matetika asehon'ny IP. Ny isa voalohany dia porofo vovoka, ary ny isa faharoa dia porofo amin'ny rano. Ankehitriny Gogogo motera elektrika dingana telo, teknisianina maotera mandeha amin'ny herinaratra dia manazava ny haavon'ny fiarovana ny moto IP isam-bolana dia maneho ny dikany. ...
Ahoana no hamahana ny olan'ny herinaratra elektrika nihaona taminao
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-10-30
Fahadisoana sy vahaolana amin'ny motera Faulties antony mety hijerena na calibratiron fomba 1. Tsy afaka manomboka ny motera tsy mitondra entana 1.Circuit tapaka tariby (noe ny telo no fotony) 2.Rehefa mihodina ny dingana telo an'ny zaza ireo mpandika dingana (Y karazana fampifandraisana) 3.Ny p ...
Mahazo PRICELIST farany farany avy aty aminay
ZHEJIANG GOGOGO MEECHANICAL & Electric CO., LTD, toy ny mpanamboatra efa za-draharaha sy mpamatsy motera, paompy rano ary vokatra azo avy amin'ny vokatra hafa ...
NO.411-412, TRANONDRO 1, JIAKAICHENG, ZEGUO AVENUE, WENLING CITY, ZHEJIANG, CHINA.